Tahirim-bola Iraisam-pirenena (FMI) : Namoaka vola 86 tapitrisa Dolara ho an’i Madagasikara -
AccueilRaharaham-pirenenaTahirim-bola Iraisam-pirenena (FMI) : Namoaka vola 86 tapitrisa Dolara ho an’i Madagasikara
Mametraka ny fitokisany tanteraka amin’i Madagasikara sy ny Fitondram-panjakana Malagasy amin’ny ezaka vita ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena na ny FMI ankehitriny. Noho izay indrindra, nanome vola mitentina 86 tapitrisa Dolara ho an’i Madagasikara izy ireo, izay tafiditra indrindra amin’ny fandaharana FEC na Facilité Elargie de Crédit. Izany hoe, efa nisy ampahany azontsika mitentina 44 tapitrisa Dolara tamin’ny taona 2016 ary niampy 42 tapitrisa Dolara izany ka nanome an’io 86 tapitrisa Dolara io.
Raha ny fanazavan’ny minisitry ny Vola sy ny Tetibola, Gervais Rakotoarimanana, omaly, 30 tapitrisa Dolara no tanjona tamin’ny fangatahana nefa, tonga hatramin’ny 42 tapitrisa Dolara izany tamin’ity. Noho izay indrindra, mitohy hatrany ny fanatanterahana ny fandaharana FEC, izay voasoritra mandritra ny telo taona.
Nambaran’ny minisitra, nandritra ny tatitra nataony, tetsy amin’ny ministeran’ny Vola sy ny Tetibola (MFB) Antaninarenina mantsy, fa nahafa-po ny FMI ny ezaka nataon’ny Fitondram-panjakana tamin’ny fanatanterahana ny fandaharana FEC.
Tafiditra amin’izany indrindra ny fanatsarana sy fanavaozana ny fitantanana ny orinasa Jirama, ny Air Madagascar, ny vola miditra amin’ny Fadintseranana, sns. Fa anisan’ny tena goavana amin’izany ny fampiakarana ny vola miditra amin’ny Fanjakana amin’ny alalan’ny fanitarana ny fampidiran-ketra. Teo ihany koa ny fanatsarana ny fandaniana ka nahafahana nahazo tahiry eo amin’ny devizy maherin’ny 1 miliara.
Ankoatra izay, raha ny fanazavana hatrany, ny 50 tapitrisa tamin’io vola io natokana tamina zavatra roa ka ny 35 tapitrisa nanamboarana ireo fotodrafitrasa ravan’ny rivodoza, toy ny biraom-panjakana, lalana, tetezana, sns. Ny ambiny kosa nanampiana sy nalefa tany amin’ny orinasa Jirama.
Fitoniana ara-toekarena sy politika
Manaporofo izany rehetra izany fa ananan’ny FMI fitokisana tanteraka i Madagasikara sy ny Fitondram-panjakana ankehitriny. Izay fitokisana izay indrindra anefa no andrasan’ireo mpamatsy vola sy mpampiasa vola ahafahan’izy ireo mampiasa ny volany eto Madagasikara. Anisan’ny miandry izany izao, ohatra, ny Banky Sinoa AIIB, izay vonona ny hampiasa ny volany eto amintsika. Tsy ity banky ity ihany anefa fa hatramin’ireo mpampiasa sy mpamatsy vola iraisam-pirenena matanjaka avy amin’ireo firenen-tsamihafa. Hita mibaribary izao fa mipetraka ary tafapetraka ny fitoniana ara-toekarena sy ara-politika eto Madagasikara.
Ankoatra izay, raha ny marina, tsy ilay tarehim-bola na/sy sora-bola navoaka sy nomen’ny FMI no zava-dehibe ho an’ny firenena fa ilay fitokisana napetraka mba hananan’ireo mpamatsy vola fahatokisana an’i Madagasikara.
Amin’izao fotoana anefa, maro ireo mitady hisompatra ilay fisandratana sy fitokisana azon’ny firenena sy ny Fanjakana Malagasy. Anisan’izany ity fitokonan’ny mpiasan’ny fadintseranana amin’izao fotoana izao ity. Rehefa hita fa misondrotra ilay toekarem-pirenena dia kasaina hosomparana mba hananan’ny Fitondram-panjakana endrika ratsy amin’ireo mpiara-miombon’antoka sy mpamatsy vola vahiny mba hampihemotra azy ireo. Takona tanteraka anefa izany fikasan-dratsy handetika ny firenena izany noho ny ezaka vitan’ny Fitondram-panjakana tamin’ny alalan’ny fandaharana FEC ka nahazoantsika fitokisana tamin’ny FMI.
Marihina kosa fa tsy mamatsy vola amina tetikasam-pananganana fotodrafitrasa ny fandaharana FEC.